ထုတ်ကုန်များ > 6-Chloro-5-azaindole (74976-31-1)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 6-Chloro-5-azaindole (74976-31-1) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
SKU: 74976-31-1 အမျိုးအစား: Heterocycles
APICMO 6-Chloro-5-azaindole ပါဝင်သောထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာအမျိုးအစား intermediates ကပိုင်ဆိုင်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
MDL အရေအတွက် MFCD08690133
InChI Key ကို 1S/C7H5ClN2/c8-7-3-6-5(4-10-7)1-2-9-6/h1-4,9H
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း 6-Chloro-5-azaindol;6-CHORO-5-AZAINDOLE;6-CHLORO-5-AZAINDOLE;6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine;1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine, 6-chloro-
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 152.581
အပြုံး ClC1C = C2C (= CN = 1) ကို C = CN2
6-Chloro-5-azaindole (74976-31-1) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
(74976-31-1) GHS H ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
6-Chloro-5-azaindole GHS P ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် 6-azaindoline ၏ 5-အမိုင်နိုအနကျအဓိပ်ပါယျ၏ pharmacologic လေ့လာမှု
6-Chloro-5-azaindole (74976-31-1) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 6-Chloro-5-azaindole (74976-31-1)
6-Chloro-5-Azaindole ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စေရန် in-Depth နိဒါန်း
6-Chloro-5-Azaindole ကျနော်တို့ PICMO မှာပေးသောများစွာသောထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ထို့အပြင် 6-ချောရိုတေးဂီတ-5-Azaindole, 6-Chloro-1H-pyrrolo [3,2-က c] pyridine သို့မဟုတ် 1H-Pyrrolo [3,2-က c] pyridine ဟာအလယ်အလတ်အမျိုးအစားပိုင်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသောဤထုတ်ကုန်, ။
ကျနော်တို့ CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်အမြောက်အမြားအတွက် 6-Chloro-5-Azaindole (74976-31-1), ထုတ်လုပ် synthesizing နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဤတွင် 6-Chloro-5-Azaindole များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာရဲ့:
6-Chloro-5-Azaindole များအတွက် Synthesis လမ်းကြောင်းအကြံပြု (74976-31-1)
6-Chloro-5-Azaindole ၏ဓာတု Properties ကို
အောက်တွင် 6-Chloro-5-Azaindole များ၏ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများဖော်ပြထားပါတယ်တစ်စားပွဲဖြစ်ပါသည်:
CAS အရေအတွက် 74976-31-1
InChl Key ကို CBHXTZKXDLDMJZ-UHFFFAOYSA-N ကို
အံ Mass 152.58 g / mol
သိပ်သည်းဆ 1.425 g / cm3
ရေဆူမှတ် 335.8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
တည်ငြိမ်မှုနှင့် reactivity ကို
ဒီထုတ်ကုန်ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေး, သင်ထိုကဲ့သို့သောမီးတောက်, မီးစများ၌၎င်းနှင့်အပူအဖြစ်အခြေအနေများမှရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်, ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်အပါအဝင်အေးဂျင့်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအန္တရာယ်ရှိသောလောင်ကျွမ်းခြင်းထုတ်ကုန် oxidizing အဖြစ်ပစ္စည်းများကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
6-Chloro-5-Azaindole ကိုင်တွယ်သောအခါ, သငျသညျအစွမ်းကုန်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကြောင့်ပေါ့ပေါ့ဆဆကိုင်တွယ်လျှင်ပြင်းထန်သည့်ရောဂါများကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါသည်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲကိုင်တွယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအန္တရာယ်များအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
ရှူရှိုက်မိပါ 6-chloro-5-Azaindole လွန်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
အမှု၌သင်၏မျက်စိသို့ရရှိသွားတဲ့, တကအလေးအနက်မျက်စိယားယံမှုတွေနှင့် / သို့မဟုတ်အလေးအနက်မျက်စိပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သငျသညျအစွမ်းကုန်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူ 6-Chloro-5-Azaindole ကိုင်တွယ်ရန်အဘို့အအထက်ပါအကြောင်းပြချက်များသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
သငျသညျ 6-Chloro-5-Azaindole များ၏အန္တရာယ်များကနေသင်တို့ပတ်လည်သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုတားဆီးနိုငျသညျ့နညျးလမျးမြား၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ အောက်ပါဒီအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းဥစ္စာကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာယူနိုင်ရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအမံများနေသောခေါင်းစဉ်:
6-Chloro-5-Azaindole အသုံးမပြုတဲ့အခါ, အောက်ပါပြုပါရန်သေချာစေပါ:
တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာတံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ။ ဤသည်လေထုထဲသို့ပေါက်ကြားကနေတားဆီးနှင့်ရှူရှိုက်မိပါကတဆင့်လာသောအန္တရာယ်များကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစမတော်တဆယိုဖိတ်မှုနှင့်ဖြစ်စေတဲ့အန္တရာယ်ကနေအဆိပ်သင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီနိုင်သည်။
ရေတွင်းတစ်တွင်းလေဝင်လေထွက် store မှာကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်သိမ်းဆည်း။
ပစ္စည်းဥစ္စာအဆိပ်သင့်ကြောင်းသိကြမည်မဟုတ်ပါသူကိုသားသမီးများ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်အခြားသူများအားဖြင့် access ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့စတိုးဆိုင်ဖွင့်သော့ခတ်။
အကာအကွယ်ဂီယာ, ဆိုလိုသည်မှာမျက်နှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး / မျက်နှာဖုံး, မျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး / ကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးနှင့်လက်အိတ်ဝတ်ဆင်။
ညစ်ညမ်းအဝတ်အစားချွတ် ယူ. reusing မတိုင်မီနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောပါ။
သငျသညျ left အချို့သောထုတ်ကုန်ရှိပါကတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာတံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာထဲမှာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် up ပြုလုပ် lock ။
သင် contents တွေကိုကုန်ခမ်းကြလျှင်, ဒေသဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီကွန်တိန်နာများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
4. 6-Chloro-5-Azaindole ရှိုက်လျှင်ယူပါရန်ခြေလှမ်းများ
သငျသညျမတော်တဆ 6-Chloro-5-Azaindole ရှူလိုလျှင်အောက်ပါပြုပါရန်သေချာစေပါ:
သငျသညျမမှန်ခံစားရလျှင်ချက်ချင်းဆရာဝန်တစ်ဦး / ဆရာဝန်သို့မဟုတ်တစ်အဆိပ်စင်တာကိုခေါ်ပါ။
5. 6-Chloro-5-Azaindole မျိုလျှင်ယူပါရန်ခြေလှမ်းများ
ချက်ချင်းဆရာဝန်တစ်ဦး / ဆရာဝန်သို့မဟုတ်တစ်အဆိပ်စင်တာကိုခေါ်ပါ။
6. 6-Chloro-5-Azaindole သင့်အရေပြားနှင့်အတူဆက်သွယ်ပါထဲမှာလာလျှင်ယူပါရန်ခြေလှမ်းများ
အမှု၌သင်တို့ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ဆရာဝန်တစ်ဦး / ဆရာဝန်ကိုပဌနာ, အရေပြားယားယံရ။
7. 6-Chloro-5-Azaindole သင့်မျက်လုံးထဲသို့လာလျှင်ယူပါရန်ခြေလှမ်းများ
မျက်ကပ်မှန် (ရှိပါက) ဖယ်ရှားပါ။
အမှု၌သင်တို့ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ဆရာဝန်တစ်ဦး / ဆရာဝန်ခေါ်မျက်စိယားယံရ။
ကြောင့် 6-Chloro-5-Azaindole များ၏အစွန်းရောက်အန္တရာယ်ရှိသောသဘောသဘာဝရန်, ဒီအလွန်အမင်းအဆိပ်သင့်ထုတ်ကုန်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ကြသောအခါအပေါငျးတို့သအထက်တွင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအကြံပြုယူအရေးကြီးပါတယ်။ သင်ထုတ်ကုန်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အခါတိုင်းသင်ဤပစ္စည်းဥစ္စာများ၏အဆိပ်သတိထားမကျမည်အကြောင်းသူကသတိပေးကြောင့်သယ်ယူနေကြသည်ရှိရာအန္တရာယ်ဆိုင်းဘုတ်များထားရန်သေချာစေပါ။
ဤသည်ပစ္စည်းသာအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်ဤ post ကိုအပေါ်ပေးသောဓာတုပစ္စည်းအန္တရာယ်, မီး, နှင့်ကျန်းမာရေး data တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်သူကိုအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းအတွက်စနစ်တကျအရည်အချင်းပြည့်မီပညာရှင်များ၏အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကိုင်တွယ်ရပါမည်။
9. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှု / Exposure ထိန်းချုပ်မှုများ
10 ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ:
11 ။ မီးတိုက်ပွဲအစီအမံ
တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဒီထုတ်ကုန်ကပါဝငျသောမီး၏အမှု၌, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ငြိမ်းအေးသို့မဟုတ်အခြောက်အမှုန့်ကိုသုံးပါ။ self-ပါရှိသောအသက်ရှူယန္တရားနှင့်အကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုလည်းဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
12 ။ တက်သန့်ရှင်းရေး၏နည်းလမ်းများ
13 ။ စွန့်ပစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား
သင်တစ်ဦးလိုင်စင်ရစွန့်ပစ်ခြင်းကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့်နှင့်သင့်ဒေသခံစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းအခွင့်အာဏာတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအတွက်, အထူးစွန့်ပစ်အဖြစ်စွန့်ပစ်ခြင်းအဘို့အစီစဉ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီအမှုကိုပြုရပါမည်။
14 ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်
ဆေးဝါးဓာတုဗေဒဂျာနယ်, vol ။ 14, #5စ။ 308 - 313 Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal, vol ။ 14, #5စ။ 40 - 45
Heterocyclic ဒြပ်ပေါင်းများမှာဒီဇင်ဘာလ 1981, အတှဲ 17, Issue 12, စစ 1208-1213 ၏ဓာတုဗေဒ
Azimov, VA သို့, Bychikhina, NN & Yakhontov, ln Chem Heterocycl Compd (1981) 17: 1208 ။